ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၉-၆-၂၀၁၃ - ညပိုင်း)
မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၉-၆-၂၀၁၃ - ညပိုင်း)
- သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နှင့် တွေ့ဆုံရန် RCSS/SSA ရန်ကုန်သို့ ထွက်ခွာ click
- ဇွန်လအရေးအခင်း တနှစ်ပြည့် အခမ်းအနား ပြုလုပ် click
- မောင်တော အကြမ်းဖက်ခံရသည့် နှစ်လည်နေ့ အမျိုးသမီးအဖွဲ့က အလှူအတန်းလုပ် click
- မအီမြို့ ဆေးရုံတွင် ဆရာဝန် မရှိ၍ တကိုယ်တော် ဆန္ဒပြ click
- မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ထားမှုကို ILO ရုပ်သိမ်းမည် click
- ပြဿနာပေါ်လျှင် အလုပ်သမားတွေဘက်က အခမဲ့အကျိုးဆောင်မည်ဟု မဏ္ဍိုင်အကယ်ဒမီ ပြော click
- ပထမဆုံး ချစ်ကြည်ရေး မြန်မာ့ရေတပ်သင်္ဘော စစ်တကောင်းဆိပ်ကမ်းသို့ ရောက်ရှိ click
- ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ပြည်နယ်တောင်းဆိုမှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ... (ဆောင်းပါး) click
- အစိုးရပိုင်မီဒီယာ အများပြည်သူမီဒီယာအဖြစ် အမည်ပြောင်းသော်လည်း အစိုးရငွေသုံးပြီး လည်ပတ်မည် (ရုပ်သံ) click
- ခိုကိုးရာဘ၀မှ အများအားကိုးရာဘ၀သို့ ကြိုးစားတက်လှမ်းကြဖို့ ဇေယျသုခ ဆရာတော် မိန့်ကြား click
- မြန်မာအနောက်နယ်စပ် တိုင်းရင်းသားကလေးများ ပရဟိတကျောင်း ထောက်ပံ့ငွေများ ပိုလိုအပ်နေ click
- ဖားရိုက်ထွက်ရာမှ မောင်တော နတလ ရွာသားတဦး ဓားထိုးခံရ click
- ဘာကြောင့်များ ကလေးတွေကို အတွေးအခေါ်တွေ သင်နေကြပါလိမ့် click
- အဆင့်မြင့်တက္ကသိုလ် (Centre of Excellence) ဘာလဲ၊ ဘယ်လဲ - အပိုင်း (၆) click
မြန်မာပြည်ကမလေးရှား ကိုရောက်နေတဲ. ဘင်္ဂလီ တွေ
နဲ. ဒေသခံ မွတ်ဆလင် တွေပေါင်းပြီး စနစ်တကျ
နေရာ၊ စားတဲ.နေရာ ၊ အလုပ်နေရာ တွေစနစ်တကျ ထောက်လှမ်း သတ်ဖြတ်နေတာပါ ၊
တခုခုရွေး ရမယ်.အနေအထားပါ ။
ဒေါ်စုကတော. တခုခု ပြောမယ်ထင်ပါတယ် ။
အေးကွာ ဒေါ်စု က တော့ အားလုံး ဥပဒေကို လေးစားလိုက်နာဖို့အမြဲ ပြောပြ နေတာပဲကွာ ခင်ဗျား လက်ရှိ မြန်မာပြည်အစိုးရ လူကြီးတွေကောသိရဲ့ လား
‌ဒေါ်စုကို တရားဥပ‌ဒေစိုးမိုး‌ရေး ဥက္ကဋ္ဌခန့်‌ပြီးကတည်းက တစ်‌ခုမဟုတ်‌တစ်‌ခု ပြဿနာ ပတိပက္ခ‌တွေဖြစ်‌‌နေတာာဟာ ရှင်း‌နေတာပါပဲ။ ဒီလိုအချိန်‌မှ ချိန်‌ကိုက်‌ဗုံး‌တွေလိုမျိုး ပြဿနာ‌တွေ
ထထကွဲ‌တော့ ကြားထဲက ရဟန်းရှင်‌လူ‌တွေ အတွက်‌ ‌ဘေးဖြစ်‌တာပါ။ ‌ဟော အခုဆိုရင်‌ အမျိုးဘာသာ သာသနာအတွက်‌‌တောင်‌ အန္တရာယ်‌ရှိလာပါပြီ။
မလေးရှား မှာ အလုပ်သွားလုပ်သူတွေ မှာ အသိ ထဲက
တယောက်မှ မရှိ ပါဘူး ။
ဒါပေမယ်. ကိုယ်.နိုင်ငံ သားတွေ အသတ်ခံရတာတော.
နိုင်ငံတော် အကြီးအကဲ များလည်း ကိုယ်.နိုင်ငံ သားတွေ
ရဲ. ဒုက္ခ ကို စာနာနိုင်ပါစေ ။
ပါးစပ်ကသာ ပြည်သူကို ကာကွယ်မယ် ပြည်သူ့အတွက် ရှေ့တန်းက ရပ်တည်မယ်တာပြောတယ် တကယ်တန်းကျတော့ စကားတစ်ခွန်းတောင်မဟသေးဘူး